Home News Madaxweyne Xasan Sheekh oo safar ku tagaya qaar kamid ah Gobolada Dalka
Madaxweyne Xasan Sheekh oo safar ku tagaya qaar kamid ah Gobolada Dalka
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ahna Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka ayaa la filayaa in uu bilaabo safaro uu ku tagayo qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya.
Maalinta berito ah ayaa safarkiisa ugu soo horeeya waxa uu ku tegi doonaa Magalada Kismaayo ee Xarunta gobolka Jubbada Hoose ee Maamulka Jubbaland.
Gelinka dambe ee Maanta ayaa waxaa Magalada Kismaayo tegi doona wafdi horudhac u ah safarkiisa oo isugu jira Xildhibaano ka tirsan labada Aqal ee ka tirsan Xisbigiisa.
Booqashadaan ayaa ku soo aadeysa xilli khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyo dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyada,waxaana Maamulka Jubbaland uu yahay maamulkii ugu horeeyay ee dhisma xilligii Madaxweyne uu dalka ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud.
Previous articleMadaxda Villa Soomaaliya oo lagu eedeeyay iney kaalin ku lahaayeen cunaqabateynta laga qaaday Eritrea
Next articleMahad Cabdlla Cawad oo kulan xasaasi ah la qaatay wafdi caalami ah oo ka socday Dalka Sudan
Banaan-baxyo kala duwan oo Muqdisho ka socda (Faah-faahin)